China Q-switch nd yag laser peeling carbon nd yag laser fanesorana tatoazy K11 Mpanamboatra sy mpamatsy | Zohonice
Q-switch nd yag laser peeling carbon nd yag laser fanesorana tatoazy K11
Ny vondrona pigment dia hitatra mandra-pipoakany miaraka amin'ny angovo mihabe avo kokoa. Ny sasany amin'ireo sela pigmenta dia ho lasa kely kokoa, avy eo dia esorina amin'ny vatana. Ny sasany ho tototry ny macrophage, ivelan'ny rafitra vialymphatic amin'ny vatana.
>> Fampidirana fohy
Ny vondrona pigment dia hitatra mandra-pipoakany miaraka amin'ny angovo mihabe avo kokoa. Ny sasany amin'ireo sela pigmenta dia ho lasa kely kokoa, avy eo dia esorina amin'ny vatana. Ny sasany ho tototry ny macrophage, ivelan'ny rafitra vialymphatic amin'ny vatana. Farany, hanjavona hanjavona ilay loko.
Mandritra izany fotoana izany, ny sela mahazatra dia tsy handray ny halavan'ny laser, noho izany, ny fitsaboana azo antoka ary tsy hisy dian-kapoka.
Fanesorana ny marika nahaterahana,
Polo mena sy volontany
Esory ny toerana misy ny kafe sy ny Ota
Manadio volomaso sy manadio eyeliner
Basis Data Famaritana ny entana
Karazana Milina fanatsarana tarehy matihanina
Loharano maivana Q-Switch Nd Yag Laser
Tombontsoa ampitahaina amin'ny mpifaninana 1time manasa fanesorana tatoazy fanadiovanaUtra Mazava Tanana mena mena mikendry ny fitifirana marinaMba habe kokoa, mora entina.
Fiteny miasa Anglisy / Espaniola / Torkia / Italia / Rosiana / Korea… (azo namboarina)
Rafitra mangatsiaka Rivotra mangatsiaka + Rano mangatsiaka
Hery famoahana 2000W (Max)
Voltage fampidirana AC110 / 220v10% 50HZ / 60HZ
Milanja / lanja mavesatra 12kg / 17kg
Masinina refy 43 * 22 * ​​38cm
>> Toetra mampiavaka
1.Mora ny miasa, sitrana haingana.
2.Tsy misy rà, tsy ilaina ny fampiterahana narcotization.
3.Ny teknolojia avo lenta sy vaovao laser-fipoahana eo noho eo.
Fampisehoana 4.LCD amin'ny fiteny sinoa sy anglisy, fanaraha-maso lavitra IR.
Famolavolana baravaran-trano 5.Standardized, mety amin'ny fikolokoloana.
6.Tsy hanimba ny folon'ny volo, tsy handratra hoditra tsotra sy tsy misy volo.
7. Laser mafy orina, novokarina araka ny fenitra iraisam-pirenena, miorina amin'ny fananana.
>> Bebe kokoa
Teo aloha: Ny kalitaon'ny vidiny farany azo antoka sy azo antoka nd yag laser fanesorana tatoazy K10
Manaraka: 1064nm 532nm valizy azo entina miaraka amin'ireo pigment laser milina fanesorana tatoazy K12
nd yag fanesorana tatoazy laser
Kalitao tsara kalitao indrindra azo antoka sy mety nd ...
1200W Herinaratra Micro Picosecond 755nm Laser T ...
1064nm 532nm valizy azo entina amin'ny kisoa laser ...
Wrinkle Removal Pigment Removal Picosecond Lase ...
Pico seco laser fanesorana pigment nd tato tato r ...